पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन्ः प्राधिकरण प्रमुख सुशील ज्ञवालीMain Samachar
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन्ः प्राधिकरण प्रमुख सुशील ज्ञवाली
"७ लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही मध्य ९९ प्रतिशतले लिए पहिलो किस्ता "
११ पुष २०७७, शनिबार १६:१८ प्रकाशित
काठमाडाैँ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राससका लागि पुर्णप्रसाद मिश्रले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही मध्य ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुप¥यो ।
छानविन हुन्छ । यसअघि ६ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरुपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ, यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
गैर सरकारी संस्थाबाट ९० अर्बको काम गर्ने सम्झौता भएकामा ६२ अर्बको काम सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । गैससले गरेका कामको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ ।
गत वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ । कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिमणि कति ढिला हुन्छ?
बेला बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो, त्यसबीचमा कस्ता कस्ता अनुभव प्राप्त भए ?
राष्ट्रिय परामर्श परिषद्मा सबै दलका नेता बसेर प्राधिकरणका कामको प्रसंशा भएको छ । विकास सहायता समितिले पनि प्रसंशा गरेको छ । गर्व गर्न लायक काम भएको समितिको ठहर छ । विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्राधिकरणले स्थापित गरेको छ ।रासस